MyoWin, Author at နည်းပညာ - Page4of 11
ဓာတ်ပုံကနေ ဖောင့်ကို ပြန်ရှာကြမယ်။
အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် ပုံထဲမှာပါတဲ့ font ကို လိုအပ်လာတာမျိုးရှိဖူးလား?
ဥပမာ လမ်းသွားရင်း ကြော်ငြာတစ်ခုတွေ့တယ်၊ အဲဒီထဲမှာ သုံးထားတဲ့ font လေးလှလို့ အင်တာနက်ပေါ်က ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?
အရေးအကြီးဆုံးကို ပြောပြမယ်၊ အဲဒါကတော့ လက်စွဲတော်ဖုန်းလေးထုတ်ပြီး အဲဒီကြော်ငြာကို ဓာတ်ပုံရိုက်လာခဲ့။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အဲဒီဖောင့်ကို အင်တာနက်မှာ ပြန်ရှာမလို့။
ကြော်ငြာမှာ ဖောင့်နာမည်မှမပါတာ ဘယ်လိုရှာမလဲ? နည်းနည်းလွတ်သွားပြီထင်တယ်လို့ လျှောက်တွေးမနေနဲ့ဦး။ အဲဒီရိုက်လာတဲ့ပုံကို အင်တာနက်မှာတင်ပြီး ပြန်ရှာလို့မလို့။ စိတ်ဝင်စားသွားပြီဆိုရင် ဆက်ပြောပြမယ်။
နည်းပညာတွေ တိုးတက်လာတဲ့နောက် မဖြစ်နိုင်တာဆိုတာ သိပ်မရှိသလောက်ပဲ။ Google Images နဲ့ Tineye တိုမှာဆိုရင် ကိုယ်က ပုံတစ်ပုံကို တင်လိုက်ရင် အဲဒီပုံနဲ့ တူတဲ့ ပုံတွေကို အရွယ်အစားအမျိုးမျိုး၊ resolution အမျိုးမျိုးနဲ့ ပြန်ရှာပေးတယ်။ ဒီလိုပဲ font အတွက်လည်း font ပါတဲ့ပုံလေးတင်ပြီးတော့ font ဖိုင်ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်လို့ရတယ်။ အဲဒီလိုမျိုး website လေး နည်းနည်းကို ပြောပြပေးလိုက်တယ်။
အကောင်းဆုံးကတော့ What the font ဆိုတဲ့ site ပါပဲ။ သူ့လိပ်စာက အစကတော့ www.whatthefont.com ပါ။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ http://www.myfonts.com/WhatTheFont/ ကိုပြောင်းသွားပါတယ်။
ကြိုက်တဲ့ လိပ်စာတစ်ခုခုကို သွားလိုက်ပါ
ပြီးရင် အခုန ကြော်ငြာကို font လေးပဲ ကျန်အောင် ဖြတ်ထုတ်လိုက်ပါ
ပြီးရင် အဲဒီပုံလေးကို တင်လိုက်ပါ
ဒါဆိုရင် တင်လိုက်တဲ့ပုံနဲ့ တူတဲ့ font တွေကို ရှာပေးပါလိမ့်မယ်။ တစ်ခါတည်း download လည်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။ Free ရတဲ့ font တွေဖြစ်နိုင်သလို ပိုက်ဆံပေးဝယ်ရတဲ့ font တွေလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလိုမျိုး ပုံကနေ font တွေပြန်ရှာပေးတဲ့ တစ်ခြားဆိုက်တွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ Google မှာ reverse font search လို့ရှာလိုက်ရင် တွေ့နိုင်ပါတယ်။
Android Device တွေမှာ boot animation ကို ပြောင်းကြည့်မယ်
Android Device တွေမှာ boot animation ကိုပြောင်းဖို့အတွက်
၁ ။ သင့်ဖုန်းက root ဖောက်ပြီးသားဖြစ်ရပါမယ်
၂ ။ root explore ဆော့ဝဲလ်လိုအပ်ပါတယ်
၃ ။ custom boot file လိုအပ်ပါမယ်
ကဲအဲ့ဒါတွေ အကုန်စုံပြီဆိုရင်တော့ boot animation ကို ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ animation ပြောင်းလို့ရပါပြီ
boot animation တွေကို Google မှာ ရှာလို့ရပါတယ်…
Huawei U8818 ICS 4.0.3တင်ချင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ORIGINAL Firmware ပြန်တင်ချင်ရင်ဘဲဖြစ်ဖြစ် အောက်ကနည်းတိုင်းလုပ်ပါ့မယ်အခုပာာကတော့ ICS firmwar 4.0.3 တင်နည်းပါပထမဦးဆုံး u8818 ရဲ့ ICS firmware ဖိုင်ကိုအရင်ဒေါင်းရပါမယ်။
ICS firmware 4.0.3 ကို ဒီမှာဒေါင်း ပါ
ပြီးရင် သင် ဒေါင်းထားတဲ့ zip ဖိုင် ကိုဖြည် လိုက်ပါ။dload ဆိုတဲ့ folder တစ်ခုရပါလိမ့်မယ်။
ထို folder ထဲမှာ UPDATE.APP ဖိုင် ကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ဒုတိယအရေးကြီးတာကတော့ Kingstom SD ကဒ် 2GB (or) 4GB တစ်ကဒ်လိုပါလိမ့်မယ်။ Firmware တင်ဖို့က အဓိက SD card ကောင်းကောင်းတစ်ကဒ်လိုတာပေါ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သင် firmware ဖိုင်ကို ထည့်ထားပေမယ့် ဖုန်းက အလုပ်မလုပ်နိင်ခြင်း။ SD ကဒ်၏ စွမ်းဆောင်ရေ နည်းခြင်းကြောင့် ဖုန်း boot မှ SD card အား အတက်နေးခြင်း စသည့် အခြေအနေများကြောင့် Firmware တင်လို့မရခြင်းအခြေ အနေများစွာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကဲစမယ်နော်။
၁။သင့်ဖုန်းအား Power ပိတ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် သင့် SD Card အား ကွန်ပျူတာတွင် တပ်ကာ Format ရိုက်လိုက်ပါ။
၂။ သင် ခုနက zip ဖိုင်ဖြည် ချထားတဲ့ (UPDATE.APP) ပါတဲ့ dload folder အား SD Copy ကူးထည့် လိုက်ပါ။
၃။သင့်ဖုန်းတွင် SD ကဒ်ပြန်တပ်လိုက်ပါ။
၄။ သင် ဖုန်းအား ပါဝါ ဖွင့်လိုက်ပါ။ပြီးရင် System Setting > Storage> Software Upgrade> SD card upgrade> Select “OK” ပေးလိုက်ပါ။ Restart ကျသွားပါလိမ့်မယ်။
၅။ ဘာမှလုပ်ပေးဖို့မလိုပဲ Firmware စတင်ပါလိမ့်မယ်။ Step 1> Step2 > Step3သူ့မှာသူအလိုလို အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
၆။ ပြီးရင် Restart ကျပြီး Boot ပြန်တတ်လာပါလိမ့်မယ်။ Recover mode ကိုသူ့မှာသူ ၀င်သွားပါလိမ့်မယ်။
၇။ Restart ထပ်ကျပြီး ပြန်တက်လာလျှင် သင့်ဖုန်း ICS ဖြစ်သွားပါပြီ။ 😀
အခုအောက်ကနည်းလမ်းကတော့ Original Firmware ပြန်တင်နည်းပါ အောက်ကနည်းအတိုင်းဆက်လုပ်ပါ့မယ်
Original Firmware ကို ဒီမှာဒေါင်း ပါ အထက်မှာ ပြောထားတဲ့ နံပါတ် (၃) အဆင့်ထိ လုပ်သွားပါ။
၄။ ပြီးရင် သင့်ဖုန်းကို ပါဝါမဖွင့်ခင် Volum (+ ကော , – ကော)နှစ်ခုလုံးကိုဖိထားပါ။
၅။ ပြီးရင် ထိုနှစ်ခုလုံးကိုဖိထားပြီး POWER ခလုပ်ကိုပါ ထပ်ဖိထားပါ။ ထိုအချိန်မှာ နံပါတ်(၅) မှာရေးထားတဲ့အဆင့်တိုင်းအကုန်လုပ်သွားပါလိမ့်မယ်။
ကဲ အခုတော့ ကလိချင်တိုင်းကလိလို့ ရပါပြီဗျာ စိတ်မပူရတော့ဘူးပေါ့ပဲာပဲာ 😀
Singapore Web Design (web-designer.sg) website ကို ဥပမာ ထားပြီးတော့ website ရေးနည်းကို သင်ပြပေးထားတဲ့ video tutorial ဖြစ်ပါတယ်။ HTML5 နဲ့ CSS3 ကို အသုံးပြုပြီး ရေးပြထားပါတယ်။ အသံသွင်းတုန်းက mic ပြဿနာ နည်းနည်းရှိသွားလို့ အသံက တိုးနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် vlc medai player နဲ့ အသံကို ၂၀၀% လောက်ထား နားထောင်ရင် ကြားရပါတယ်။
Video တွေကတော့ အောက်မှာပါ –